Turkiga oo sidii uu Imaaraadku Somalia u galay oo kale UK ku sameeyey + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Turkiga oo sidii uu Imaaraadku Somalia u galay oo kale UK ku...
Turkiga oo sidii uu Imaaraadku Somalia u galay oo kale UK ku sameeyey + Sawirro
(London) 24 Abriil 2020 – Shixnaddii soo daahday ee muddada laga sugayey Turkiga si loogu qalabeeyo shaqaalaha NHS oo la hardamaya coronavirus ayaa noqotay 32,000 xabbo oo dharka kalkaaliyaasha ah –kuwaasoo dhowr saacadood uun ku filan.
Saanaddan Turkiga laga sugayey oo Arbacadii UK gaartey iyadoo ay siddo dayuurad ciidan oo ay leeyihiin Ciidanka Cirka dalkaasi (RAF) oo dhowr mar baaqatay ayaa laga sugayey 84 tan oo agab kala geddisan ah, kuwaasoo ay ku jiraan 400,000 oo ah dharka ay xirtaan howlwadeennada caafimaadku.
Yeelkeede, sida ku qoran Health Service Journal, waxaa agabka la keenay ku jira 32,000 oo maro oo qura – tiiyoo uu Wasiirka Bulshada, Robert Jenrick, uu shirkiisa jaraa’id ka sheegay inay “sugayaan shixnad ballaaraan.”
Warkan ayaa Dowladda UK kusii kordhinaya cadaadiska ku saabsan in aanay haynin agab ku filan shaqaalaha caafimaad ee la tacaalaya Covid-19, gaar ahaan agabka la isku ilaaliyo ee PPE.
Imaaraadka ayaa beri dhowayd la sheegay inuu saabbuun baakado kusoo xirey ka dejiyey magaalada Muqdisho, waloow aysan si rasmi ah uga hadlin DF.
Previous articleHab-dhaqanka siyaasiyiin naq-raac ah oo u kala gooshaya Somalia–Itoobiya-Kenya oo khasab ka dhigaysa in dib loo eego qodob ku qoran Dastuurka Somalia (Faarax Macallin oo sharraxay)
Next article”Waa heshiis ka dhan ah DF” – Saxaafadda Kenya oo farxad kusoo dhoweysey heshiiskii Nairobi (Xog dheeraad ah oo ku jirta tibxaha heshiiska oo ay kashiftay)